आजको राशिफल २०७६ श्रावण २६ गते आइतबार |
आजको राशिफल २०७६ श्रावण २६ गते आइतबार
वि.सं. २०७६ श्रावण २६ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अगस्ट ११ तारिख, परिधावी नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : पुत्रदा एकादशी व्रत, श्रावण शुक्लपक्ष (गुँलाथ्व) एकादशी तिथि, दिउँसो १२:४९ बजेसम्म, त्यसपछि द्वादशी तिथि, मूल नक्षत्र, मध्यरात्रीपछि ०३:०६ बजेसम्म, त्यसपछि पूर्वाषाढा नक्षत्र, चन्द्रमा धनु राशिमा (अहोरात्र व्याप्त), वैधृति योग, दिउँसो ०२:०७ बजेसम्म, त्यसपछि विष्कुम्भ योग, सुरुमा विष्टि (भद्रा) करण दिउँसो १२:४९ बजेसम्म, त्यसपछि बब करण मध्यरात्रीपछि १२:५५ बजेसम्म, अन्तिममा बालब करण, आनन्दादि योग : सिद्धि, चन्द्रवर्ण : पहेंलो, चन्द्रदिशा : पूर्व, योगिनीदिशा : आग्नेय, वारशूल : पश्चिम, काठमाण्डौ, नेपालमा, सूर्योदय : बिहान ०५:३१ बजे, सूर्यास्त : साँझ ०६:४५ बजे, दिनमान : ३३ घडी ०४ पला (१३ घण्टा १३ मिनेट, रात्रीमान : २६ घडी ५६ पला (१० घण्टा ४७ मिनेट)
राहु काल : साँझ ०५:०६ देखि ०६:४५ सम्म, यमघण्ट : दिउँसो १२:०८ देखि ०१:४७ सम्म, गुलिक काल : दिउँसो ०३:२७ देखि ०५:०६ सम्म
शुभ वारवेला : दिउँसो ०१:४७ देखि ०३:२७ सम्म, अमृत वारवेला : बिहान १०:२९ देखि १२:०८ सम्म, लाभ वारवेला : बिहान ०८:५० देखि १०:२९ सम्म, आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा वायव्य (उत्तरपश्चिम) र ईशान (उत्तरपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
नवौं भावमा चन्द्रमा पुगेको छ । अब स्वास्थ्य सबल हुनेछ, भाग्यबल बढ्ने छ, रोकिएका काम बन्न थाल्नेछन् । धार्मिक वा आध्यात्मिक प्रवचन वा गाथा सुन्दा सन्तुष्टिको अनुभूति गर्नुहुनेछ । कसैलाई ज्ञान र अर्ति दिनुभयो भने उसले त्यसबाट लाभ पाउने छ । घरायसी सम्बन्ध राम्रै रहने छ । बन्दव्यापारमा सानो प्रयासले राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । आज घरपरिवारमा देखिएका पुराना कामधन्दा पूरा गर्ने र समस्या हल गर्ने समय हो । जीवनसाथी वा बालबच्चासँग कुराकानी गरी व्यवहारिक जानकारी लिनु असल हुनेछ । आज आफूमुनिका नातेदार वा बालबच्चासित राम्रो व्यवहार गर्नुहोला । अभिभावक वा गुरुजनको शुभकामना प्राप्त गरेमा छात्रछात्राले उन्नति गर्ने समय छ ।
आठौं चन्द्रमाका बाबजुद शुभग्रहको प्रभाव रहेकाले सानोतिनो समस्याले तपाईंको उत्साहमा कमी ल्याउने छैन । आफूले गरेका मिहिनेत र परिश्रमको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । पुराना काम, समस्या, चुनौती र सम्झनालाई पुनः जीवन्त तुल्याई सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । सानातिना व्यवहारिक काम र घरेलु समस्या सुल्झाएर लाभ लिनका लागि दिन अनुकूल छ । स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । नयाँ काम थाल्दा व्यवहारिक लाभ पुग्नेछ । तपार्इंको व्यक्तिगत दृष्टिकोणले दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्नेछ । दानपुण्यप्रति आकर्षित बन्नुहोला । घरिघरि रिस र आवेग बढ्न सक्छ । त्यसैले खासगरी हातहतियारको प्रयोग गर्दा, सवारी चलाउँदा वा बाटो काट्दा धैर्य भई अघि बढ्नुपर्छ ।
तपाईंको निर्णय क्षमताको प्रशंसा हुनेछ र दूरदर्शिताको सर्वत्र चर्चा हुनेछ । दाम्पत्य जीवन असल हुनेछ वा अविवाहित हुनुहुन्छ भने कसैले नयाँ सम्बन्धको प्रस्ताव राख्न सक्छ । वादविवाद र झैझगडामा आफ्नो जित हुनेछ । उपहार, चिट्ठा, पुरस्कार आदिबाट आकस्मिक धनप्राप्तिको सम्भावना छ । भोजभतेर र रमझममा सहभागी भइने छ । मायाप्रेम, रतिराग र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ । विपरीतलिङ्गी सहयात्रीबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ । गृहिणीहरूले सन्तानपक्षबाट सहयोग पाउने दिन छ । प्रशंसा, बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ । कुनै बन्दव्यापार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने साझेदारी वा सहकार्यमा गरेको काममा फाइदा छ ।
आज छैटौं घरमा चन्द्रमा छ, रिस, आवेग र क्रोधलाई नियन्त्रणमा राखी काम गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइने दिन छ । पुर्ख्यौली सम्पत्तिको विवाद छ भने आज त्यसलाई निराकरण गर्ने दिन हो । गरेका हरेक क्रियाकलापमा प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । साथीभाइले काममा सहयोग पुर्याउने छन् । पुरानो र बिर्सिसकेको साथीसँग भेट हुने सम्भावना छ । मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ । सिर्जनात्मकता र व्यवहारिकतातर्फ मन आकर्षित हुनेछ । घरायसी समस्या समाधान गर्न सकिने छ । माया र प्रेमको वातावरण तैयार हुनेछ । तर्क, विवाद र झैझगडा जस्ता क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ । सरकारी कामबाट पनि फाइदा नै हुनेछ, तर आफ्नै घमण्ड र बडप्पनले समस्या निम्त्याउने समय छ, सचेत हुनुपर्छ ।
विवेक, सोच र चिन्तनबाट फाइदा लिन सकिने समय छ । पठनपाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मानसम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुनेछ । व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ । साँझपख धनलाभ हुने सङ्केत छ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन् । सृजनात्मक सफलता मिल्नेछ । समाजसेवा गर्दा प्रशंसा प्राप्त हुने योग छ । भाइबहिनी र छोराछोरीले सहयोग गर्नेछन् । गृहस्थीहरूले छोराछोरीको समस्यामा केन्द्रित हुने दिन छ । प्रायः सबैको बौद्धिक क्रियाकलापप्रति झुकाव बढ्ने छ । खासगरी बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्ति वा छात्रछात्राका निमित्त सिर्जनात्मक काममा उपलब्धी लिनसकिने दिन हो । अध्ययन, अध्यापन र लेखनकार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ ।
चतुर्थ भावमा चन्द्रमा र शनिको युति बनेको समय चल्दैछ, निराशाभाव र वितृष्णा जाग्ने समय हो । घरपरिवार र छरछिमेकमा असमझदारी बढ्न सक्छ । परिवारका सदस्यहरू खासगरी आफूमुनिका परिवारजनसँगको आत्मीयतामा कमी आउनसक्छ । मित्र र सहयोगीको साथ पाउन सकिंदैन । सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । गोप्य राखेमा मात्र महत्वाकाङ्क्षी योजना सफल हुनेछ । अप्ठ्यारा र गैरकानुनी कामबाट फाइदा हुँदैन । पारिवारिक समस्यामा समय र धन खर्च हुनसक्छ । रोजगारी र बन्दव्यापारमा कडा परिश्रम गरेमा सोचेजस्तै उपलब्धी लिन सकिने छ । अभिभावक, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँग वादविवादको सम्भावना पनि छ, चुप लाग्नु बेस हुनेछ ।
दाजुभाइ र बन्धुबान्धवको सल्लाहले रोकिएको काम बन्न सक्छ । आध्यात्मिक भावनाको विकास हुनेछ । सेवामूलक र परोपकारी काममा खट्ने वातावरण प्राप्त हुनेछ, दिनदुःखी र असहायको आशीर्वाद लिन सके लाभ हुनसक्छ साथै धार्मिक/सामाजिक काममा प्रशंसित हुने अवसर पनि पाइने छ । साथीभाइ र मित्रबाट पनि विशेष सहयोग र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । बन्दव्यापारमा राम्रो छ । पेसाव्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मान र साख जोगाउन सकिने छ, आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन् । पशुपालक र दुग्धव्यवसायमा संलग्नहरूले मनग्ये लाभ प्राप्त गर्नेछन् । मेवा, मिष्ठान्न र परिकार मिल्नेछ । प्रतिस्पर्द्धात्मक समय देखिन्छ, साहसिक क्रियाकलापमा दिलचस्पी जाग्नसक्छ ।
धनभावमा चन्द्रमा र शनिश्चरको युतिसम्बन्ध देखिन्छ । मनमा असन्तुष्टि र कौतूहलता व्याप्त हुने दिन हो । तर आजको दिन आर्थिक रूपमा केही न केही लाभ प्राप्त हुने समय छ । परिवारमा कलह, विवाद र झगडाको वातावरण पनि सिर्जना हुनसक्छ । मित्र र सहयोगीले सहयोग गर्न सक्ने छैनन् । समग्रमा धैर्य, संयम र सचेत भई बस्नु जायज हुनेछ । दिनदुःखीलाई गरेको सहयोगले भाग्य बढ्ने छ । आर्थिक क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सकिने छैन, तर दैनिकीमा खासै असर पर्दैन । स्वास्थ्यमा चिसो र घाँटीको सामान्य समस्या देखिन सक्छ । मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा धनखर्च गर्न मन हौसिने छ । दिदीबहिनी वा भान्जाभान्जीका चाहना पूरा नहुनाले ठाकठुक पर्नसक्छ ।
मन चञ्चल भए पनि आजको दिन राम्रो छ । यद्यपि क्रोध, प्रतिशोध, रिसराग र उत्तेजना माथि नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ । निर्णय सार्थक हुनेछ । मित्रवर्गबाट सोचेजस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ । प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापबाट लाभ मिल्नेछ । आम्दानीमा कमी आउने छैन, मनमा कताकता केही कमी भएझैं लागे पनि समग्रमा आजको समय लाभकारी नै हुनेछ । पारिवारिक जीवन र प्रणय सम्बन्धमा पनि सकारात्मकता नै देखिन्छ । बौद्धिक क्षेत्रमा समेत राम्रो छ । कुनै नयाँ काममा मन जानेछ । नियमित तथा दैनिक कामधन्धा र व्यवसायबाट राम्रो फाइदा हुनेछ । गुमेको वा सापटीमा गएको धन फिर्ता आउनेछ । छात्रछात्राले प्राविधिक वा सिर्जनात्मक क्रियाकलापमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् ।
व्ययस्थानमा चन्द्रमा रहे पनि राशिस्वामीका साथमा चन्द्रमाको युतिसम्बन्ध रहेकाले सरकारी, प्रशासनिक वा अड्डाअदालतमा विचाराधीन रहेका विषयबाट लाभ लिन सकिने छ । धार्मिक, सामाजिक महत्वको क्षेत्रको भ्रमण हुनसक्छ । दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । दानपुण्य वा परोपकारका क्षेत्रमा लगानीको समय छ । कृषिक्षेत्र र पशुचौपायाबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । दौडधूप गर्नु परे पनि लाभ नै हुनेछ । दैनिक व्यवहारमा खर्च बढ्न सक्छ । प्रेम सम्बन्धमा आएको तिक्तता हटाउने प्रयास हुनेछ । ढिलै भए पनि काम सम्पन्न हुनेछ । लामो दूरीको वा दुरदराजको यात्राबाट लाभ लिन सकिन्छ । भ्रमण, पर्यटन वा घुमघामको अवसर मिल्नसक्छ ।
सरकार र राज्यपक्षबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ । अध्ययन अध्यापन सफल रहेको छ । व्यापारबाट सोचेजस्तै लाभ प्राप्ति हुने योग छ । पशुव्यवसाय र कृषिपेसाबाट सन्तोषजनक लाभ हुनेछ । नोकरी र सामाजिक क्षेत्रबाट मानसम्मान प्राप्त हुनेछ । साथीभाइ र नातेदारबाट उपयोगी सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुनेछ । शारीरिक प्रतिस्पर्धाका कामतिर मन जानेछ । विगतका कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गर्दै मन प्रसन्न बनाएर काम गर्नुहोला, सफलता तपाईंको मुट्ठीमा छ । रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ । आम्दानीमा कमी आउने छैन । तर छोराछोरीका क्रियाकलापले मन पिरोल्ने समय छ, केही लगानी गर्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ ।
कर्म क्षेत्रमा बलियो चन्द्रमा भएकाले विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधूप गर्नु पर्ने दिन छ । धार्मिक अनुष्ठान र मङ्गलमय कृत्य सम्पादन हुनसक्छन् । व्यवसायमा पनि प्रशस्तै लाभ हुनेछ । गरेको प्रयास सार्थक बन्नेछ । रोजगारीको राम्रो अवसर हात पर्न सक्छ । सरकारी जागिरेले महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्नेछन्, प्रशंसा, बढुवा वा उन्नतिका लागि गरेको प्रयास सफल हुनेछ । अप्रत्याशित कामबाट फाइदा लिन सकिने छ । मिहिनेत र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । छात्रछात्राले दूरगामी लक्ष्यप्रति सचेत भई कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्ने समय आएको छ, किनभने आज कर्मसिद्धिको समय हो, जस्तै बाधाअड्चन र विघ्न पनि दूर गरी अघि बढ्ने हौसला प्राप्त हुनेछ ।